Maitiro Ekukurumidza Kumhanyisa Metabolism: Tarisa Kunze Kunoshamisa Kurema Matipi Matipi!
Blackberry tii: Tsvaga mabhenefiti ayo chinwiwa ichi chinogona kuunza kuhutano hwako!
kuonda	 25 December 2018
Metabolism izita rakapihwa kubasa rekushandura zvinovaka muviri kuti zviite simba nemuviri wemunhu. Inoitika mumasero ese uye inodiwa kugadzira hupenyu, kuita kuti moyo wako urove, nhengo dzako dzishande, ropa rako ripararire, uye huropi hwako hushande. Mune mamwe mazwi, kuziva kukurumidza kumetabolism chinhu chinodiwa kwete chete nekuda kwezvakanaka zvikonzero, kana nechinangwa chekudzikira uremu, asi zvakare nekuvandudza hupenyu hwehupenyu, kuva nesimba, kuwedzera hupenyu, kufara.
Mune inotevera misoro iwe uchave uine akakosha matipi ekuti ungamhanyisa sei metabolism yako. Ona imwe neimwe yadzo uye ita kuti muviri wako ushande kupfuura zvawave!
Nzira yekumhanyisa metabolism kushaya huremu?
Chokwadi, kana iwe uri kutsvaga kuve nehumwe hutano hupenyu, iwe wanzwa nezve mamwe maekisesaizi anonzi cardio. Aya maekisesaizi ane zita iri, chaizvo, nekuti anowedzera kuwedzera kweropa mukutenderera, kunokonzerwa nekumhanyisa kwemetabolism.
Imwe nzira yekuti iwe uderedze huremu uye nekumhanyisa metabolism yako panguva imwe chete iri kuita iyi chaiyo mhando yekurovedza muviri, iri aerobic, yakakwira-simba, inowanzoitwa mukushanda kwekudzidzira uye mukati Crossfit.
Imwe nzira yekumhanyisa metabolism yako kuti udzikise uremu ndeyekugadzirisa kudya kwako. Bvisa makabhohaidhiretsi zvishoma nezvishoma, tanga kudya zvakawanda protein, shandisa Tsangamidzi, sinamoni, chokoreti yakasviba, broccoli, zviyo zvakakwana uye yakakosha tip: isa cayenne mhiripiri mune zvekudya zvako zvine munyu, irubatsiro rwakanaka kumhanyisa metabolic kufamba.
Ko kana metabolism ichinonoka?
Kwemakore uye maitiro asina hutano, metabolism yevanhu inodzikira. Izvi zvakajairika, asi zvinogona kudzivirirwa kana kuderedzwa. Ingoita shanduko mumararamiro ako.
Kurarama zvine hutano hakuna kunaka chete kune hutano hwepanyama, asi zvakare nezve aesthetics, kurasikirwa uremu, hupenyu hwehupenyu, varaidzo, muchidimbu, akateedzana maitiro akakosha ekurarama zvakanaka pamusoro pemakore.
Naizvozvo, kuti umhanyisa metabolism yako uye uve nechido uye mufaro wekurarama, unofanirwa fudza zvakanaka, nenzira yakaenzana uye ine hutano, inwa marita mazhinji emvura pazuva, kurara kwemaawa masere kana anopfuura, kurovedza muviri, kuzorora kubva kubasa kana kudzidza, zorora, verenga, wana nguva yako wega, enda neshamwari, nakirwa nemhuri, zvakadaro, zvese izvi zvinokubatsira iwe kukurumidza metabolism yako.
Maitiro ekuchimbidza iyo metabolism yemushure memakumi matatu nemashanu?
Sezvatotaurwa, mushure meimwe zera iyo metabolism inodzikira uye izvi zvinobatsira nemararamiro anotungamirwa nevanhu. Kunze kwekutsvaga kuve nehunhu hwakanaka, idya chikafu chinobatsira kumhanyisa metabolism yako, ita zviitwa zvako zvekusimudzira maseru kutenderera ropa, kuisa mari muhunhu uye mamiriro anozoita kuti hupenyu hwako huve nehupenyu.
O Tsangamidzi mubatsiri mukuru kukurumidza metabolism. Iyo ine zvivakwa zvinobatsira muviri kupisa uye nekukurumidza basa remitochondria.
Chinhu chakanaka nezve ginger ndechekuti inogona kudyiwa mumamiriro akasiyana uye nenzira dzakasiyana: mune muto, tii, masaladi, broth, nyama, muchidimbu, kubva kutapira kusvika kune munyu, munzvimbo dzakasiyana. Zano nderekusarudza ginger inogara iri nyowani, patembiricha yakajairwa, asi kana uchizogadzira tii, semuenzaniso, inogamuchirwa.
Ndezvipi zviri nani zvekudya zvekumhanyisa metabolism?
Kunze kweginger iyo yakakosha yekumhanyisa metabolism, zvimwe zvekudya zvakare zvakanaka kwazvo. Cayenne mhiripisi inonhuwira inogona kushandiswa muchikafu chako uye inobatsira mune ino maitiro, yakasviba chokoreti, iyo inenge isisina shuga uye inokurudzira kwazvo, broccoli, zviyo zvese, mbatatisi, Tea Yakasvibirirakana vhiniga, michero nemiriwo akasiyana siyana, zvese izvi zvinobatsira iwe kuti uve nekukurumidza metabolism.
Nzira yekumhanyisa metabolism kusvika kune yakanyanya?
Iko hakuna nzira iwe yaunogona kukurumidza kumhanyisa metabolism yako kwenguva yakareba. Iine miganhu uye izvi zvinofanirwa kuitwa nekuchenjerera. Pamusoro pemaitiro ane hutano, kudya kunovaka muviri kune zvinovaka muviri zvinobatsira maitiro aya, unofanirwa kuita maekisesaizi epamoyo uye iwe unogona kutora zvinowedzera zvine simba rekumhanyisa metabolism munguva kana maminetsi usati waenda kune yako yakakura chiitiko chekuita.
Kuyamwisa inzira inotonhorera yekumhanyisa metabolism uye zvakare kuonda. Vakadzi vazhinji vanokwanisa kurasikirwa nemapaundi ese avakawana panguva yepamuviri nekungoyamwa chete, vasina kana kuenda kuijimu.
Izvi zvinodaro nekuti chiito ichi chinoita basa pamukadzi wese muviri, wakabatana nemetabolism. Nekuyamwisa, amai vanopedza simba rakawanda uye, nekuda kweizvi, zvakakosha kupisa mafuta uye makabhohaidhiretsi. Nekudaro, iye acharasikirwa mapaundi uye anomhanyisa iyo metabolism, uku achipa mwana.
Inibium Caps ine yakasimba kwazvo kudya inodzvinyirira pamusika, ine fomula yepamusoro inokwanisa kubvisa mafuta. Uye zvakare, yakagadzirwa kuti ibvise zvachose kufutisa uye kufutisa nenzira yechisikigo, ine macapuleti anoshamisa anokwanisa kudzora nzara, akapfuma mune zvinovaka muviri uye mavitamini.
Kana iwe uchida kurasikirwa nezvimwe zviyero uye woita rugare neyakaenzana kamwechete uye zvachose, Inibium Caps ishamwari huru. Iine 100% fomula yakasikwa uye isina njodzi kumuviri, inopa simba rakawanda rehupenyu hwezuva nezuva uye nekupiswa kwemafuta emuviri.
Nekutevera iwo mirairo yekushandisa Inibum Caps, iwe unozoona zvisingaite mabhenefiti. Buda:
kudzora chirwere cheshuga
Kudzora kukwira kweropa
Bvisa mafuta kuburikidza netsvina
Inoderedza kushandiswa kwepasta
Anorwa cellulite uye sagging
Inovandudza uye inogadzirisa ura
Hapana zvinopesana kana mhedzisiro
Inibium Caps inoshanda zvechokwadi here? Zvakakosha here?
Ehe, Inibium Caps inoshanda uye inoshanda chaizvo. Iyo fomura yepamberi yakagadzirirwa kubvisa kufutisa uye kufutisa. Uye zvakare, yakagadziriswa kuitira kuti uve nemuviri wawaigara uchirota nezvazvo uye, uremu nekukurumidza uye nenzira ine hutano.
Deredza kudya kwako uye tinya pane bhatani pazasi uye tenga yako Inibium Caps izvozvi!
Kana iwe waifarira chinyorwa ichi nezvekuti ungamhanyisa sei metabolism, igovane pane ako masocial network!
Best gyms muBH: Takakusarudzira iwe!
LowCarb Kudya kwemasikati: Anoshamisa mazano echikafu chinonaka pasina kuenda kunodya!
kutinhira muzambiringa wamwari
Dumbu risina kunaka